सञ्चार अनुप्रयोगहरू जुन तपाईंको ब्याट्री नाघ्छ
सफ्टवेयर र अनुप्रयोगहरू एन्ड्रोइड मात्र
तपाईँको फोनको ब्याट्री घटाउन सक्ने संचार अनुप्रयोगहरूको सूची
by नेडेम अनथ
यी एप्स जाँच गर्नुहोस् यदि तपाईंको ब्याट्री चाँडै मर्यो
ब्याट्री स्वायत्तता कायम राख्न चुनौतीहरू मध्ये एक हो जुन स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरू दैनिक आधारमा हुन्छन्, त्यसैले विशेष बानीहरू र हैकहरू जसले ब्याट्री जीवन सुरक्षित गर्न सक्दछ, सबै महत्त्वपूर्ण छ।
ब्याट्री नालीमा आउँदा जब सबै भन्दा ठूलो अपराधीहरूले संचार अनुप्रयोगहरू कलहरू सिर्जना गर्न र प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। यी एप्सहरूले मात्र स्क्रिन प्रयोग गर्दछ तर अडियो हार्डवेयर र सञ्जाल जडानहरू पनि छैनन्, र प्राय: अधिसूचनाहरू धक्का गर्न उपकरणलाई आगमन कल वा सन्देशका लागि जगेडा गर्न। भिडियो कलिङ एप्स ब्याट्रीको लागि पनि खराब छ किनकी उनीहरूले सम्पूर्ण वार्तालापमा स्क्रिन समय आवश्यक पर्दछ।
जबकि पाठ दिन र अनुप्रयोगहरू कल गर्दा sparingly प्रयोग गर्नु पर्छ यदि तपाईं दिनभरि ब्याट्री जीवन कायम राख्न चाहानुहुन्छ, त्यसैले पनि अनुप्रयोगहरू र मिडिया प्लेयरहरू Netflix र YouTube जस्तै जस्तै हुनुपर्छ। जब ठूलो प्रोसेसर प्रयोग उच्च प्रोसेसर प्रयोगसँग युग्मित भएको हुन्छ, यो सबै दिन लामो समयसम्म एक विश्वसनीय शुल्क पकडाउन असम्भव छ।
तल धेरै सञ्चार अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंको ब्याट्री सबैभन्दा अधिक नाच्छ। सूची व्यक्तिगत अनुभव र बनाइएको अध्ययनबाट र AVG टेक्नोलजीजद्वारा प्रकाशितमा आधारित छ।
नोट: यदि तपाइँ दैनिक रूपमा यी एप्सको प्रयोग आवश्यक छ भने, हेर्नुहोस् कि तपाईको सेलफोन ब्याट्री लाइभको बारेमा केहि अन्य सुझावहरूका लागि सुधार गर्नुहोस् जुन तलबाट एप्सहरू हटाउँदैन।
फेसबुक र मैसेन्जर
यो कुनै गोपनीय छैन कि तपाईले धेरै प्रयोग गर्नुभएका अनुप्रयोगहरू उपकरणको ब्याट्री छिटो निस्कन जाँदैछन्, र फेसबुक र फेसबुक मेसेन्जर एपको लागि हेर्नका लागी दुई ठूला हुन्छन्।
यी अनुप्रयोगहरू सामान्यतया सधैँ सधैं हाम्रो स्क्रिनको शीर्षमा अगाडि राख्छन् तर यदि तपाईंसँग विशेष तरिकाले सूचनाहरू सेट अप गर्दै छन् भने, तिनीहरू तपाईंको फेसबुक साथी साथी स्थिति अपडेट गरे पछि तपाईं दौड जारी राख्नुहुन्छ र तपाइँलाई सतर्कता दिन जारी राख्नुहुन्छ, पृष्ठभूमि र अप्रयुक्त हुन्छ।
एउटा अतिरिक्त समस्या जुन यी एप्ससँग उत्पन्न हुन्छ जुन तिनीहरू गहिरो निद्रामा जान नपर्छ र लगातार उपभोग्य स्रोतहरू छन् र यसैले ब्याट्री, यस तथ्यको माथिमा अडियोले सत्र पछि बन्द गर्दैन।
हेर्नुहोस् कसरी फेसबुक र मैसेन्जर अनुप्रयोगहरूले थप जानकारीको लागि फोनको ब्याट्री डेलिभर गर्दछ।
इन्स्टाग्राम फेसबुक जस्ता अर्को अनुप्रयोग हो जुन इन्टरनेटमा निरन्तर ताज़ा गराउँछ र सामान्यतया नयाँ सामग्री उपलब्ध हुँदा अधिसूचनाहरू पठाउन सेट गरिएको छ। यस तरिकामा यसको निरन्तर उपयोग भनेको के हो जुन ब्याट्रि ड्रेडिङ एपको रूपमा ग्रस्त हुन्छ।
स्नैपचाट यसको अस्थायी चित्र र च्याटको इतिहासको लागि प्रसिद्ध छ, तर ब्याट्रीको प्रयोगमा यसको प्रभाव सबै तर छोटो छ र एप प्रयोग भइरहेको बेलासम्म हेर्न सकिन्छ।
भिडियो र भ्वाईस मात्र स्नैपचत भारी छैन, तर सम्पूर्ण एप साझेदारीको आधारमा केन्द्रित छ, जुन प्रत्येक सन्देशको लागि Wi-Fi वा सेलुलर डेटा प्रयोग गर्दछ। यो फेसबुक भन्दा अलग छ जुन सन्देशहरू क्यास गर्न सक्छ र सधैँ डेटा प्रयोग गर्दैन।
KakaoTalk एप पहिले नै उल्लेख गरिएको दुई भन्दा माथि उल्लेख गरिएको भन्दा फरक छैन तर यसले अझै पनि स्रोतहरू खाएको छ जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो सर्वोत्तम छ कि यो एपलाई मात्र राख्नुहोस् यदि तपाईंको नेटवर्कमा धेरै साथीहरू छन् भने।
ooVoo भिडियो च्याट गर्ने अनुप्रयोग हो जुन धेरै सहभागीहरूसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। जबकि यो राम्रो, सजिलो फिचरहरूमा अमीर छ, यो पनि केहि ब्याट्री लालच संग आउछ।
OoVoo मेटाउनुहोस् यदि तपाईंलाई दिनभरि तपाईंको ब्याट्रीको रमाईलो राख्न आवश्यक छ र धेरै प्रयोग गरिरहनु हुँदैन।
WeChat अर्को भिडियो सन्देश एप हो जुन धेरै रोचक सुविधा छ र यसमा सामाजिक नेटवर्किंग जस्तै फेसबुक पनि समावेश छ।
तथापि, केही प्रयोगकर्ताहरूले ढिलो हुनका लागि उजुरी गर्छन्, जुन शायद बैटरी ड्रेनरको संकेत हो। यसको माथि, WeChat, यस पृष्ठमा अन्य सन्देश पठाउने एप्स जस्तै, स्क्रीन समयको मांग गर्दछ र केवल राम्रो काम गर्दछ जब अधिसूचनाहरू र सतर्कता कन्फिगर गरिन्छ, जसले ब्याट्री जीवनलाई अझ प्रभाव पार्छ।
जापानमा बिग द्वारा एन्ड्रॉयड फोनहरूको लागि पसलसेवी एपको समीक्षा
सैमसंग भुक्तानी र एप्पल भुक्तानको विरुद्ध एन्ड्रोइड वेतन स्ट्याक अप कसरी हुन्छ?
Android को लागि Google ईबुक रीडर
एन्ड्रोइड उपकरणहरूका लागि मेरो स्वास्थ्य पाल
5 Android का लागि निःशुल्क क्यामेरा अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइडका लागि नाउ एप
तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणको लागि उत्तम नि: शुल्क वालपेपर
8 Android को लागि अद्वितीय नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू
एन्ड्रोइड पे चाँडै यूनाइटेड किंगडममा आउँदैछ
DYMO Rhino 4200 औद्योगिक लेबल मुद्रक समीक्षा
3 उत्तम नि: शुल्क अनलाइन संगीत भण्डारण सेवा
कसरी खोज इन्जिनहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस् र फायरफक्समा एक-क्लिक खोजी प्रयोग गर्नुहोस्
आरएसएस फाइलको एनाटोमी
Twitter Language: Twitter Slang र Key Terms
म कसरी Instagram टिप्पणीहरू ट्रयाक गर्छु?
लिनक्समा "cmp" उपयोगितासँग फाइलहरू तुलना गर्नुहोस्
सिम्स बस्टिन 'आउट धोखा र कोड्स को लागि PS2'
तपाईंको टायरको दबाव अनुगमन गर्दै
माइक्रोसफ्ट वर्ड 2010 र 2007 मा तस्वीरहरू र क्लिप आर्ट सम्मिलित गर्नुहोस्
WiFi जडान वा साथ वा वायु वाल्ड
फ्री स्ट्रिमिंग संगीतको लागि 15 उत्तम साइटहरू
लोकप्रिय स्टैंड-एक्लो रेन्डरिंग समाधानहरूको सूची
लिपिक डिजाइनमा स्क्रिप्ट फन्टहरू कसरी प्रयोग गर्न प्रयोग गर्नुहोस्
ASUS K53E-A1 15.6 इन्च बजेट ल्याप्टप पीसी
के तपाईंको लागि सही एक प्रीपेड आईफोन खरिद गरिरहेको छ?
तुलनात्मक चुम्बकको तुलना र कोइला फोनो कार्ट्रिज प्रकारहरू चलिरहेको छ
यदि तपाईंले नयाँ टिभि यो पढ्नु भएको छ यो पहिलो पहिलो
Blogroll के हो?
म्याकमा म्याकस सिएरा रनिंगको लागि न्यूनतम आवश्यकताहरू
जब तपाई सन्देशहरू सम्पादन गर्नुहुन्छ तपाईंको नाम थप्नबाट आउनुहोस्